Fahazarana mahasalama: manome voninahitra an’ Andriamanitra
"Fa olom-boavidy hianareo,koa dia mankalazà an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. " - 1 Kôr. 6:20.
Ny adidintsika voalohany eo anatrehan'Andriamanitra sy ireo mpiara-belona amintsika dia ny fivoaran 'ny tenantsika manokana. Ny fahafaha-manao rehetra izay nomen'ny Mpahary antsika dia tokony hokolokoloina ho amin'ny fivelarany sy ny fahatsarany ambony indrindra mba hahafahantsika manatanteraka asa soa betsaka indrindra. Amin'izay ny fotoana dia ho voatokana ho amin'ny fanaovan-tsoa izay mikendry ny fanorenana sy fitandroana ny fahasalamana mafy orina eo amin'ny ara-batana sy ara-tsaina. - CG, 395.
Ny olombelona dia asan-tanan'Andriamanitra kanto indrindra, nohariany ho amin'ny tanjona ambony sy masina indrindra; ary fanirian'Andriamanitra ny hanoratra ny lalàny amin'ny lafiny rehetra amin'ny tabernakely olombelona (...) Ny fanomezana nomena eo amin'ny hozatra sy ny nofo rehetra, ny saina sy ny vatana, dia tokony hotehirizina ho madio.
Ny fikasan'Andriamanitra dia ny hahatonga ny tenan'ny olombelona ho tempolin'ny Fanahiny. Andraikitra ambony no nankinina tamin'ny fanahy tsirairay. Ny hery miasa mangina ananan'ny isam-batan'olona dia mitarika ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy. Raha manimba ny tenanao ianao, dia tsy ianao ihany no iharan'ny voka-dratsy amin'izany, fa olona maro hafa koa. Adidin'ny Kristianina eo anatrehan'Andriamanitra ny miaro ny fanahiny sy ny vatany ary ny sainy amin'izay zavatra rehetra manimba; satria tamin'ny sarany sarobidy no nividianana azy ireo - Ms 130,1899.